စုချစ်သူ: စင်ကာပူမှ အလုပ်အကိုင်များနှင့် လစာ သုံးသပ်ချက်
Posted by စုချစ် at 4/24/2010 07:20:00 PM
အမ..ဆရာဝန်နဲ့သွာဆရာဝန်တွေက ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို လစာကောင်းပီး သူဌေးဖြစ်ကြတာများပါတယ်။
အားလုံးထဲမှာ အောက်ဆုံးက ဆုတောင်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ... ခွိ ခွိ...း))
This isaprecious post. Very informative for job seekers!
u r wrong, NTU, NUS fresh grad got 2900 to 3500. Master is lower than that. master fresh grad 2500( not lucky start from 2200)
ဟင့် လစာကောင်းကောင်းတွေကို အားငယ်စွာနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။ သူများတွေလို 7000 ~ 8000 လိုချင်လိုက်တာ။
Shouldn't make conclusion as Master is lower than undergrad. Not all the NTU and NUS undergrad got 2900 to 3500. It's might be Singaporean graduated with strong thesis and it is also based on the personal confidence. Most of the myanmar engineer especially fresh grad dont have the confidence that what they can do. They only think that they cannot get the job, i dont have experience, my thesis is no good, etc ...... and ask low salary to employer. if you believe yourself how you can do and you ask the better salary, i bet you will get it. eventhough you dont have experience for the duties, you must believe yourself that you can do it well and find the way. Donot think low standard yourself.
@ ပထမ ကိုအမည်မသိ ပြောတာမျိုးကို ဆောင်းပါးထဲမှာ ထဲ့ရေးခဲ့ပါတယ်။
(တခါလေလဲ တချို့ မာစတာဘွဲ့ရမြန်မာတွေ ဒီဂရီဘွဲ့ရတွေထက် လစာနဲရတာကို ကြုံဘူးပါတယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့လဲ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ )
အဲသာဟာ လူနည်းစုလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီမှာ မြန်မာ မာစတာဘွဲ့ရ မြန်မာတော်တော်များများ well being ပါ။ တချို့လဲ ကျောင်းပြီးပြီးချင်းမှာ မြန်မာပြည်ကအလုပ်အတွေ့အကြုံနဲ့ မကိုက်ညီတာကတကြောင်း၊ တချို့ အသက်အရွယ်မငယ်တော့တဲ့ အတွက် အလုပ်သိပ်ရွေးလို့ မဖြစ်၊ အလုပ်မရမှာ ကြောက်တာကတကြောင်း၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့ Field က လူအများ လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရရာအလုပ်မှာ လစာနဲနဲနဲ့ ၀င်လုပ်လိုက်ကြရတယ်။ ကိုယ့်ကို အလုပ်ခန့်ချင်အောင် လစာကို သူများထက် ပိုနဲတောင်းကြတယ်။ အဲသာဟာ တချို့ မာစတာ သမားတွေ လစာနဲရခြင်းအကြောင်းပဲ။
တချို့လဲ ပထမအလုပ်မှာ လစာရသလောက်နဲ့ အတွေ့အကြုံရအောင် ခဏ၀င်လုပ် ပြီးတာနဲ့ လစာကောင်းတဲ့စီပြောင်းကြတာပါပဲ။
NTU, NUS fresh grad အနေနဲ့ ပြောရင်လဲ ကိုယ့်ရုံးမှာ Industrial Attachment နဲ့ လာပြီးသူတို့ ပရောဂျက်ကို စူပါဗိုက်ဇ်လုပ်ပေးဖူးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကိုယ်တိုင်က ကျောင်းပြီးတော့ လစာဘယ်လောက်နဲ့ အလုပ်ရတယ်ဆိုပြီး ပြောပြကြတာပါ။ မလေးလူမျိုး စင်ကာပူလူမျိုး တရုတ်လူမျိုး မြန်မာလူမျိုး တွေ ပါပါတယ်။ အဲသာကို အခြေံပြီး လစာပျမ်းမျှဘယ်လောက်ရကြသလဲ ရေးထားတာပါ။
@ ဒုတိယ ကိုအမည်မသိ ပြောတာကို အလေးအနက် ထောက်ခံပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက်ရှိပါ။
ဆောင်းပါးမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ကုမ္ပဏီအကြီးတွေမှာ လစာစံနှုန်းထားတွေရှိလို့ မြန်မာတွေကို နှိမ်လို့ မရပေမဲ့ ကုမ္ပဏီအသေးတွေက နဲပေးရလေ သဘောကျလေမို့ ကိုယ့်လစာကို နဲမတောင်းမိစေရအောင်၊ များပြီးလဲမတောင်းမိစေရအောင် အပြင်ဈေးကွက်မှာ ဘာတွေဘယ်လိုရှိသလဲသိစေချင်လို့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးတာပါ။ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီလစာတွေက လူအားလုံးအတွက် အကုန်မှန်မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အပေါ်ကရေးထားတာ ပြန်ကုဒ်ပြလိုက်ပါတယ်။
(ခန့်မှန်းလစာလို့ ပြောတဲ့အတွက် အတိအကျ လူတိုင်းအတွက် မှန်မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ပညာအရည်အချင်း၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ ကိုယ်လုပ်မဲ့ အလုပ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပျမ်းမျှအနေနဲ့ စင်ကာပူမှာ လစာတွေ ဘယ်လိုရကြတယ် ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းသိကြစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်လို Filed မျိုးက လစာဘယ်လောက်ရနိုင်တယ်၊ ဘယ်လိုင်းက ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ သိစေဖို့ အတွက်လဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။)
oil and gas field က လူတွေ တနေ. ကို SGD 300- 750 မြန်မာတွေ ရကြပါတယ်။
ဟုတ်တယ်... မနေ့ညကပဲ သတိရနေတာ အဲသာရေးဖို့...
ကွန်မန့် ရေးပေးတာ ကျေးဇူး....
ဟိုး အရင် (၈၀-၉၀) ခုနှစ်လောက်တွေက စင်ကာပူကိုရောက်လာတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေထဲက စလန်ဘာဂျာလို Oil and Gas Filed မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အန်ကယ်ကြီးတွေ လစာကောင်းတဲ့ အပြင် Benefits တွေလဲ တအားကောင်းတယ်ပြောပါတယ်။ အခုလဲ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေထဲမှာ Oil and Gas Filed မှာ လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ ရှိပါတယ်။ တခြားအလုပ်တွေထက်တော့ လစာသာမယ်ထင်ပါတယ်။ အန်ကယ်ကြီးပြောပြတာ ဟိုးအရင်ကလောက် Benefits တွေမရတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းထဲမှာတော့ ကိုယ်တို့နဲ့ တဘက်ခ်ျထဲ Petrol နဲ့ ဘွဲ့ရ သြစီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းကတော့ လစာအရမ်းကောင်းတာသိရပါတယ်။ သူတို့ Field မျိုးက တနေ့ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး တွက်ပေးတာပါ။ Experiences များရင်များသလို တော်ရင်တော်သလို တနေ့ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ လောက်ထိ ရကြပါတယ်တဲ့။ သူက တကယ်လဲ တော်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဘွဲ့ပေမဲ့ Oil and Gas နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Cert တွေရထားပါတယ်။ တနှစ်က စင်ကာပူမှာ စာမေးပွဲလာဖြေတာ... တကမ္ဘာလုံးက အဖြူတွေလဲ အဲဒီ စာမေးပွဲ လာဖြေကြတာ သူတယောက်ပဲ အောင်သတဲ့။ ဒီလိုလူမျိုး လစာကောင်းတာ အံ့သြစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်....
Thanks to Ma Su Chit Thu for sharing,
Everone gets what it has given.
Oil field, so tough life asasecond most risky job after mining profession.
Ifaperson is not competent to do own assignment, return to home within 24 hrs.
I saw those oil field peoples who were running 48 to 72 hrs under hi-pressure without sleeping.
A real professional job but it needs huge sacrifices.
So, Hard work, More money, Die early.
စာတွေလာဖတ်သွားတယ်။ ပန်းချီဆွဲထားတာတွေ ကြည့်ပြီး အားကျသွားပါတယ်။ သင်္ကြန် သီချင်းတွေကြားတိုင်း အမကို သတိရတယ်။ Sorry ဘယ်နားရေးခဲ့ရမှန်း မသိလို့ ဒီမှာဘဲ ရေးခဲ့တာ :) အကိုကြီးကိုလည်း သတိရတယ် ပြောပေးပါ။
အမတို့လဲ ညီမလေးကိုရော၊ မောင်လေး ကိုAWT ကိုရော အမြဲသတိတွေရနေပါတယ်။ ညီမလေးတို့ သတင်း ဌေးဆီက မေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ရောက်တော့ ပိုတောင်သတိရနေသေးတယ်။ စင်ကာပူလာမလည်တော့ဘူးလား...။ သီချင်းတွေေ၇ာ ဆိုဖြစ်သေးလား...
Ma Ma Su Chit ... Really appreciate for your time and your goodwill in your post.
စင်္ကာပူမှာ အလုပ်ရှာလိုသူတွေ အတွက် များစွာ အကျိုးရှိစေပါတယ် .. မျှဝေပေးဖို့ Copy လုပ်သွားပါတယ် Blog အညွှန်းပါထည့်သွင်းဖေါ်ပြပေးပါမယ်... စာရေးသူကို များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..